PayPal Musika Govera Statistics Uye Yayo Nhoroondo Yekutonga Pamhepo Kubhadhara Kugadziriswa | Martech Zone
Kunyange ini ndiri fan hombe yeAmazon, an Amazon Affiliate, uye a Prime Kupindwa muropa, Ndinodawo PayPal. Ndine kiredhiti kiredhiti kero nePayPal, ndinowana mari kumashure pamashandisirwo, uye ndinogona kumisikidza imwe yekubhadhara kune yangu PayPal Debit Kadhi - iri nyore kwazvo kune bhizinesi. Nhasi chaiye ini ndaive paSweetwater uye ndaida kutenga mamwe mahedhifoni matsva kuburikidza nePayPal. Ini zvechokwadi ndakavatenga kuburikidza neSweetwater nekuda kwavo kwePayPal Chikwereti kusangana. (Ini ndinogona kuwedzera kuti vanhu vepaSweetwater vanoshamisa chose - ini ndakatogashira runhare kubva kune wangu wandakapihwa wekutengesa mainjiniya mushure mekutenga vachindikorokotedza).
PayPal isarudzo inoshamisa yeecommerce nekuti haidi kuti yako chitoro irekodhi chero yeiyo kadhi rechikwereti data. Icho chinhu chakanaka chekuchengetedza. Ini ndinowedzera kuti pane chakakanganisika kuPayPal, hazvo, uye ndiyo yavo sisitimu mukubata nematare akapokana. Ndine mumwe wandaishanda naye uyo akabhadhara bhiri ravo, ndokuripikisa, uye pasina chero chiziviso - PayPal akangoburitsa mari yacho kubva muakaundi yekubhengi yaaishanda naye. Izvo zvakazoitika zvakatevera kwaive kunotyisa kumashure nekudzoka pakati pemapato maviri. Sezvo akange asina kontrakiti-isina chiratidzo, akazopedzisira arasikirwa kunyangwe aendesa basa.
PayPal Market Kugovana
Kubva 2020, PayPal inotonga pamhepo neinopfuura hafu yeiyo musika share. Heano kuputsika kwePayPal nevakwikwidzi vayo:
Kubhadhara processor Nhamba yeMasitemu Market Share
mutsetse 145,565 18.57%
Square Kubhadhara 18,015 2.30%
Braintree (Inowanikwa nePayPal) 17,400 2.22%
Inotia.net 13,150 1.68%
Vanco Kubhadhara Mhinduro 8,977 1.15%
MutemoPay 6,295 0.80%
Simbisa 4,261 0.49%
Kudzokera kunongedzo yangu ... PayPal haichisiri nzira yekubhadhara futi, ine yayo ecosystem online. Iine mamirioni mazana maviri evashandisi vanoshanda, mamirioni gumi nematanhatu maakaundi evatengesi, uye 200 mabhiriyoni ekutengeserana, #PayPal ndiyo yakakura kwazvo online yekubhadhara system. Kune nharaunda yePayPal ine hupenyu uye zvese zvinotengesa chete kuburikidza nePayPal uye inotenga chete nePayPal. Kana iwe uri ecommerce saiti, PayPal inofanirwa zvirokwazvo kuve chikamu chemubhadharo wako sarudzo kuti uwane panharaunda ino.
PayPal ipuratifomu yechimurenga yakashandura nyika yebhizimusi rebasa remari. Izvi infographic, Iyo Yekubudirira Nyaya yeiyo Yakanyanya Kupfuura Pamhepo Kubhadhara Sisitimu, inotarisa kuti sei Paypal yakagadzira nzira yayo kuenda kumusoro kwepamhepo kubhadharisa pasirese uye kuti inoramba ichikura sei.
Heano mamwe akakosha manhamba paPayPal:
Muna 1999, PayPal yakavhoterwa rimwe ramakore gumi rakaipisisa mazano ebhizinesi
PayPal ine 10% kukura pagore zvichienzaniswa neindasitiri avhareji 3% kukura
18% yeese e-commerce inoitwa naPayPal
PaCyberMonday ya2015, Paypal yakarova zvinyorwa mazana mana nesekondi pasekondi
Tags: ecommercenhamba dzekubhadhara pamhepoonline kubhadharakubhadhara masuwokubhadharapaypalPaypal zvakanakirapaypal kutadzapaypal infographicpaypal chikamu chemusikapaypal nhambanhamba
Hey, Douglas. Ndakatarisa kaviri data rako rekugovana musika uye zvinoita sekunge wakazvitadza nemisika migove. Ini ndichabatanidza mufananidzo pano, iwe ungada kupeta-kutarisa: https://imgur.com/a/dZ9AvOj
Ndatenda, Alex! Une chinhu chandinganongedzera kwachiri here? Ini ndinogara ndichida kupa kwainobva data seizvi.